Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Fanoherana tamin’ny Aogositra 2011
Fanoherana · Aogositra, 2011
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Aogositra, 2011
15 Aogositra 2011
Mpanoratra Jennifer Zhang · Azia Atsinanana
Onjam-pitokonana vaovao iray indray no nitranga tao Sina. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy teo anivon'ireo mpasa mpifindra monina avy any ambanivohitra miasa aminà toeram-piasana tsy ara-dalàna ireny, fa teny anivon'ireo mpamily sy mpiasa amin'ny sehatra fitaterana an-tanàn-dehibe
Bangladesh : Teratany Sa Tsy Teratany, Izany No Fanontaniana
Volana vitsivitsy izay, olona teratany Bangladeshi maro no nidina an-dalambe hanao fihaonana, rojon'olonmbelona sy fifamoriana, mitaky ny fankatoavan'ny lalàmpanorenana ny mponina any amin'izy ireo. Manambara ny heviny koa ireo Bilaogera momba ity raharaha ity.
14 Aogositra 2011
Shina: Hetsika lehibe manohitra fananganana orinasa mpamokatra akora shimika any Dalian
Mpanoratra John Kennedy · Azia Atsinanana
Nivadika ho filaharambe nitety ny tanàna ny fivoriana tao afovoan-tanànan'i Dalian, faritanin'i Liaoning, ho fanoherana fananganana orinasa mpanao fanafody ny alahady maraina. Nivoaka tamin'ny heriny manontolo ny polisy, saingy mba tahaka izany ihany koa ny mpamaham-bolongana bitika.
Mpanoratra Leila Nachawati Rego · Eoropa Andrefana
Ny hetsi-panoherana Espanola 15 m izay nahangona olona an'arivony teny an-dalambe hangataka rafitra ara-demokratika kokoa dia tonga tamin'ny dingana iray vaovao. Nanapa-kevitra ny manampahefana ny 2 Aogositra fa handràra ny fihetsiketsehana rehetra ary nampitandrina ireo mpanao fihetsiketsehana tsy hivorivory. Rakotra fanehoan-kevitra sy fampitam-baovao avy amin'ny mponina ny tambajotram-piarahamonina.
Mpanoratra Thalia Rahme · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
11 Aogositra 2011
Filipina: Fiankohofana Amin'ny Tany Ho Fanoherana Ny Fanenana Ny Vola Ho An'ny Fampianarana
Mpianatra an'arivony no nidina an-dalam-be tao Filipina ny 19 Jolay 2011, mangataka ny fampiakarana ny teti-bola ho an'ny fampianarana avy amin'ny Filoha Noynoy Aquino andro vitsivitsy monja talohan'ny fanambarany ho an'ny firenena. Nampiasa ny fiankohofana amin'ny tany ireo mpianatra mba hanehoan'izy ireo ny alahelony.
09 Aogositra 2011
Mpanoratra Katie Manning · Amerika Latina
Iran: Nitarika Fisamborana Ny Ady Fifampitorahan-drano Tany Teheran
Ny rehetra dia mahafantatra fa tsy tokony hilalao afo. Any Tehran, dia toa, na ny milalao rano aza dia mety hiteraka olana. Farafaharatsiny dia 'lesona' azon'ireo tanora Iraniana izany rehefa nosamborin'ireo mpitandro filamianana izy ireo ny herinandro lasa teo noho ny fandraisan'izy ireo anjara taminà lalaon'ny ady fifampitorahan-drano teny amin'ny...
08 Aogositra 2011
Mpanoratra Sylvio Combey · Afrika Mainty